Nhau - Chigadzirwa chinoshanda sumo
Chigadzirwa chinoshanda sumo
Beijing Wistron Technology Ltd. Traffic Equipment Co, LTD. gadzira solar nzira yemigwagwa uye rezuva LED katsi maziso anovhenekera Southeast Asia. Solar road studs indasitiri yeWistron inobatsira kudzikisa huwandu hwetsaona dzemumugwagwa uye kufa kune imwe nzira yekufa.
Beijing Wistron Technology Ltd. kambani inogadzira dhizaini, kugadzira, kupa uye kumisikidza iyo nyowani-tech tekinoroji yezuva nzira yemigwagwa. Iyo rezuva LED nzira yemugwagwa inovhenekera mugwagwa une njodzi unokwira kuenda kunzira huru uye mugwagwa muSoutheast Asia. Tisati taisa zuva rezuva re LED nzira yemugwagwa pano, iyo curve mugwagwa weSoutheast Asia mune inozivikanwawo se "Iyo Tunnel yeRufu" ndeimwe yemigwagwa ine njodzi kwazvo munyika yese yeSoutheast Asia. Vatyairi vazhinji vanowanzo pinda mutsaona dzakakomba uye dzinouraya mumugwagwa unoyerera, wakamanikana uye wakasviba wemakomo. Asi iro rezuva rezuva LED mugwagwa unoponesa hupenyu hwavo.
Beijing Wistron Technology Ltd. iyo nyowani yepamusoro-tekinoroji yezuva LED mugwagwa mhete dzakateedzana ndiyo yaive hombe modhi yakashandiswa pane ino chaiyo chirongwa. Imwe neimwe nyowani yepamusoro-tekinoroji yezuva LED nzira yemigwagwa yeWistron Traffic mwenje akateedzana akaiswa mune hwaro hwemugwagwa, ichigadzira inopenya uye yambiro mhedzisiro.
Mhinduro kubva kuWistron solar LED nzira yemwenje yekujekesa panzira yemugwagwa yakave yakanyanya kunaka uye yakabudirira kusvika parizvino. Vatyairi vazhinji avo vava kusvika pamugwagwa uyu une njodzi husiku vanogutsikana zvakanyanya nekuonekwa kwedaro kunounzwa neiyo yepamusoro-tekinoroji yezuva LED nzira, iyo inobatsira kunyevera nekuyambira vatyairi venjodzi dziri kuuya dziripo mumugwagwa uri pamberi; kubatsira kutungamira uye kuchengetedza vatyairi zvakachengeteka munzira yavo.